Xil noocee ah ayaa loo magacaabi doonaa Iimaan Nuur Iikar? | Xil noocee ah ayaa loo magacaabi doonaa Iimaan Nuur Iikar? | Hal Sheegaha La Hubo
Xil noocee ah ayaa loo magacaabi doonaa Iimaan Nuur Iikar?
Warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in Guddoomiye kuxigeenkii hore ee Gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar lagu wado in dib loogu soo celiyo xilkiisii hore, kaddib markii xilkan laga qaaday sanadkii hore.
Iimaan Nuur Iikar ayaa ka mid ahaa Guddoomiye kuxigeenadii ugu cimriga dheeraa ee soo mara Gobolka Banaadir, isagoo la soo shaqeeyay afartii Guddoomiye Gobol ee ka horeeyay Taabit.
Ilo wareedyo qaar ayaa sheegaya in Iimaan Nuur Iikar lagu bedelayo Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee Arrimaha Bulshada Basma Caamir ee dhowaan la magacaabay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in magacaabideeda ay aheyd mid degdeg ah oo xaalad jirta ay ku soo aaday, xilligii la wada bedelayay Maamulkii uu hoggaaminayay Taabit, waxaana haweeneydan u sii dheer inay wali ku magacaaban tahay xilka Guddoomiyaha degmada Shingaani.
Iimaan Nuur Iikar ayaa hada la shaqeynaya Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Eng. Yariisow, waxaana wararka qaar sheegayaan in Guddoomiye Yariisow uu ka dalbaday Mr Iimaan oo qibrad u leh howlaha dowladda hoose inuu la shaqeeyo.
Mr Iikar ayaa hada ka soo muuqday shirarka Guddiyada sare ee Gobolka Banaadir, isagoo Guddoomiye Yariisow ku wehliyay shir maanta uu la qaatay Safiirka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya oo xarunta Gobolka Banaadir.